मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिन्युज–रुमको भाषाबारे बेला–बेलामा टुचकी
तपाईहरूलाई लाग्ला कन्टिर–बाबू ओल्बाका आलोचक हुन । मानिसको सोचाइ एक हिसाबले ठीकै पनि हो, कन्टिर–बाबू बडो विचित्र स्वभावका छन्– बेला न कुबेला द्यौ–बजी नयला भने जस्तो सार्वजनिक रूपमा ओल्वालाई सल्लाह–सुझाव दिइरहन्छन् । यसैलाई आलोचना भन्ने हो भने कन्टिर–बाबूलाई कुनै आपत्ति छैन ।
तर कन्टिर–बाबू ओल्बाका प्रशंसक पनि हुन् । ओल्बाको जोक्स र टुक्काको त कन्टिर–बाबू अब्बल दर्जाका फ्यान हुन् । ओल्बाले बेलाबखतमा लास्टै हँसाउने क्या ! बिच्च–बिच्चमा टुच्च–टुच्च दिइरहने ओल्बाको कलाको तारिफ गर्न कन्टिर–बाबू कहिल्यै थाक्दैनन् ।
ओल्बाले पत्रकारलाई बिहीबार पनि त्यस्तै हल्का टुच्च दिएपछि निकै हल्लखल्ल भयो । ओल्बाले पत्रकारलाई समाचार लेख्ने भाषा सिकाउन खोज्दै भनेका छन्– हिजो राजतन्त्र हुँदा राजपरिवारका सदस्यलाई हिँड्नुभयो भन्दैनथ्यौँ, सवारी भयो भनिन्थ्यो । हेर्नुभयो होइन, नजर भयो भनिन्थ्यो । अहिले उनी हिँडे, उनले खाए भनिन्छ । तपाईहरू पत्रिकामा यही लेख्नुहुन्छ होइन ?
ओल्बाले मनमा सनातनदेखि गुम्सिएर बसेका यस्ता अरू पनि टिप्सहरू सार्वजनिक गरेका छन् । कुरो सुनेर ओल्बामा लुकेको आकाङ्क्षाबारे बुझ्न कठिन भएन, कन्टिर–बाबूलाई र उनलाई हाँसो उठिहाल्यो । ए, पत्रकारलाई समाचारको भाषा सिकाउने नाममा ओल्बाले घुमाउरो पाराले आफूलाई अबदेखि ‘तिमी’ नभन, नलेख भन्न खोजेका त हैनन् कतै ?
नेपालमा मुटु भएका पत्रकार नै छैनन् भनिठान्ने ओल्बाले पहिले–पहिले राजाविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेका बेला, राजनीतिक सङ्घर्षका दिनमा पत्रकारहरूलाई यसरी भाषासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको थाहा छैन कन्टिर–बाबुलाई । तर जबदेखि दुई–तिहाइ भ्रमवाला प्रधानमन्त्री बनेका छन्, पत्रकारलाई न्युज–रुमको भाषाबारे बेला–बेलामा टुच्च–टुच्च दिइरहन्छन् ।
कन्टिर–बाबूले यस्तो क्रियाकलापपछि काम गरिरहेको ओल्बाको मनोग्रन्थीबारे कुनै भेउ पाउन सकेका छैनन् । कसैलाई थाहा छ भने कृपया कन्टिर–बाबूलाई इन–बक्स गरिदिनुहोला !
ओल्बा भाषा समाचार